Fetin’ny faran’ ny taona : Tapaka lava ny Jiro sy Rano -
AccueilSosialyFetin’ny faran’ ny taona : Tapaka lava ny Jiro sy Rano
29/12/2018 admintriatra Sosialy 0
Tefa efa tsy rariny intsony ny ampihainan’ny JIRAMA ny vahoaka, amin’ izao akatoky ny fety izao satria maty lava ny jiro moa maty lava ihany koa ny rano. Angamba tsy azaivaina amin’ ity orinasam-panjakana ity intsony, fa angovo ilaina indrindra amin’ ny andron’ ny fetin’ny faran’ny taona ny herinaratra sy ny rano. Ny herinaratra ohatra dia mba hafahana mandefa ireny zava-maneno sy hafahana ihany koa mandefa ireo fitaovana maro hikarakarana sakafo, tahaka izany ihany koa ny rano. Tsy kely fa ny lehibe indrindra, dia ilain’ ny vahoaka ny herinaratra indrindra ny jiro amin’ ny fandriam-pahalemana. Tsy ahoan’ny JIRAMA anefa izany, fa dia olany ihany ny olany ary tsy misy hirarahin’izy ireo ny vahoaka izay mandoha ny vidin’ ny herinaratra laniny isaky ny faran’ny volana. Vao avy nandraisana fitarainana indray mantsy ireo mponina eny Ambatomaro sy ny manodidina, fa ny alina tontolo hatramin’ ny 10 ora maraina dia tapaka ny jiron’ izy ireo. Tsy izay ihany fa tahaka izany ihany koa ny rano, izay tapaka ny alina ary atoandro vao miverina. Ny eny Ambatomaro anefa hoy ireo mponina, dia isan ‘ny faritra mena amin’ ny tsy fandriam-pahalemana ka toa manampy ny jiolahy indray ny JIRAMA amin’ ny fanapahany ny herinaratra.
Ankehitriny be fanahiana avokoa ny mponina manoloana ny fahatongavan’ ny faran’ ny taona, fa ho maloka izany noho ny afitsoky ny orinasam-panjakana mpamokatra herinaratra ity. Zary lasa fialantsinin’ny JIRAMA lava mantsy hoy ireo mponina ny fahateran’ ny fitaovana ampiasain’izy ireo, nefa ny vahoaka tsy mba antitra izany rehefa mandoha faktiora. Sa tokoa ve mbola tsy misy mpitantanana ny firenena, dia mandeha ny mandeha hoy ny tanora. Ny mponina eny Soavimbahoaka sy ny manodidina moa, dia tsy mety intsony amin’ ny fahatapahan-drano lava reny. Ka na dia ao an-trano aza ny paompy , dia mitovy amin’ ireo olona matsaka rano ihany satria voatery manenjika ny rano mandeha manomboka amin’ ny iray maraina. Efa tsy fohanana ny fanampiana avy amin’ ny fanjakana foibe, efa tsy amidy amin’ ny vahiny ny orinasa maninona no tsy hasiana ezaka na ho an’ny faran’ ny taona fotsiny ihany. Ny tiana ho lazaina eto dia tsy tokony atao tsinotsinona ny vahoaka, satria hiankinan-javatra maro ny vokatra avy amin’ ny Jiro sy Rano Malagasy. Ny vahoaka izay efa mizaka ny mafy amin’ izao fotoana , mifohifohy vola vao mahita vola andoavana jiro sy rano nefa dia mbola fahatapahana ihany no setriny omen’ny JIRAMA.
Antokon-dRavalomanana Marc : Nisintaka tsikelikely ireo mpanao politika matanjaka
Tsy miara-dia amin-dRavalomanana intsony ny Mfm tarihin’i Manandafy Rakotonirina. Tia tena loatra Ravalomanana, hoy izy, ka tsy mahalala afa-tsy ny tombontsoany. Nanao fanakianana mavaivay an-dRavalomanana izy tamin’iny fihetsiketsehana nataon’ny filoha teo aloha teny Analakely iny. ...Tohiny
Sivy taona lasa : Natsangan-dRajoelina ny « Gestapo HAT»